Roberto Carlos Oo Kashifay Heshiiskii Uu La Galay Mulkiilaha
By axadle Last updated May 20, 2020
Halyeyga reer Brazil ee Roberto Carlos ayaa daboolka ka qaaday sidii uu ugu dhowaaday inuu qayb ka mid ah noloshiisa ku qaato horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League oo uu qarka u fuulay inuu ka mid noqdo Chelsea.
Roberto Carlos oo aqoonsan yahay inuu ka mid yahay ciyaartoyda baasha bidix ee difaaca ugu wanaagsanaa taariikhda kubadda cagta, waxa uu waqtigii xirfaddiisu ugu fiicnayd kusoo qaatay Real Madrid oo uu muddo 11 sannadood ah u ciyaaray, una saftay 584 ciyaarood oo uu ugu dhaliyey 71 gool.
Muddada uu joogay Santiago Bernabeu, waxa uu kula guuleystay afar horyaal oo LaLiga ah iyo Saddex Champions League.
Xulka qarankiisa Brazil ayuu xilli qurux badan ku sugnaa, waxaanu hormood u ahaa guushii 2002 ay ku qaadeen Koobka Adduunka iyo kooxdii 1998 semi-finalka uu Faransiisku ku reebay oo uu dhaliyey mid ka mid ah goolasha illaa hadda aan ka go’in xusuusta.
Sannadkii 2007 markii uu dhamaaday heshiiskii uu kula jiray Real Madrid, waxa uu Roberto Carlos ku dhowaaday inuu u dhaqaaqo Chelsea oo uu heshiis la gaadhay mulkiilaheeda Roman Abrahimovic, laakiin si ay wax noqdeenba, waxa uu u dhaqaaqay waddanka Turkiga oo uu kaga biiray Fenerbahce.
Laacibkan hore ayaa hadda arrintaas daboolka ka qaaday, waxaanu yidhi: “Waxaan haystay laba dalab, Fenerbahce iyo Chelsea. Heshiiskii Chelsea muu shaqaynin, waxaanan u saxeexay Fenerbahce.
“Laakiin aad ayaan ugu dhowaaday Chelsea waxaananu isla waafaqnay wax badan iyadoo ay kaliya dhinnayd inaan tago oo aan heshiiska saxeexo.
“Waxay ahayd toddobaad ka hor intii aanan u saxeexin Fenerbahce, waxaanan ku sugnaa magaalada Paris oo aan kula kulmay Roman Abramovic iyo Peter Kenyon (Agaasimihii fulinta Blues).
“Nasiib-darro, marxaladihii ugu dambeeyey ee dhamaystirka ayay waxyaabaha qaarkood shaqayn waayeen, waana wax in badan kubadda cagta ka dhaca. Waxay dhibaato ka jirtay garyaqaanka.
“Wax walba waa laga heshiiyey, waxaanan boqolkiiba 100 hubay inaan si fiican ula qabsanayo Premier League iyo inuu ku habboon yahay hab-dhaqankayga.”